Dagaalka Soomaalida Iyo Canfarta Iyo Wararkii Igu Dambeeyay. – Xeernews24
Dagaalka Soomaalida Iyo Canfarta Iyo Wararkii Igu Dambeeyay.
7. April 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Maamulka deegaanka Soomaali-State iyo maamulka Canfarta ayaa ka hadlay dagaalkii dhacay degaano ku yaal galbeedka Gobolka Sitti ee dowlad degaanka Soomaalida, kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo aad u farabadan dad badana ku riiqday.
Wasiirka oo la hadlay Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa sheegay in Ciidamada Dowlad degaanka Soomaalida, iyaga oo difaacaya Shacabka ay gadheen guulo waweyn howlgalkana uu sii socon doono ilaa inta laga sifeyn doono dhulka Soomaaliyeed ee ay ku soo duuleen.
“Ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida waxay weerareen aagagga Haruk iyo Gewane iyagoo adeegsanaya hub culus oo ay ka mid yihiin qoryaha darandooriga u dhaca iyo bambooyin. Carruur iyo haween ayaa la dilay iyagoo hurda,” ayuu yidhi Axmed.
Warrakii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaadhaya degaanadii lagu dagaalamay ee Galbeedka Gobolka Sitti ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi laga dareemay xiisad dagaal iyo diyaargaroow horle oo u dhaxeysa dhinacyadii dagaalamay.
Shalay waxay dawladda deganka Canfartu bilowday furin cusub oo dagaal waxay soo weerareen qabsadeena qaybo ka mid ah magaalda cadayte dad shacab ahna way ku dhinteen sidda la wada ogyahay magaalada Cadayte waxaa ku sugan ciidamo ay leedahay dawladda feedaraalka Itoobia mana badbaadin shacabka aan hubaysnayn.
Warar qaar waxay sheegayaan in odey waayeel oo bukay ay canfartu si waxashnimo ugu gawraceen gurigiisi oo ku yaal magaalada Cadayte.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2021/04/ciidan.jpg 602 1077 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-04-07 09:46:542021-04-07 09:47:42Dagaalka Soomaalida Iyo Canfarta Iyo Wararkii Igu Dambeeyay.
Galbeedka Sitti oo maanta holcaysay iyo Guulo la gaadhay. SAWIRRO: Shacabka Soomaali-State oo dhiig shub iyo gurmad bilaabay.